UK: "Wasiirkii aan aftida rabin ha is casilo" David Cameron
Home Somali News UK: “Wasiirkii aan aftida rabin ha is casilo” David Cameron
UK: “Wasiirkii aan aftida rabin ha is casilo” David Cameron
Rai’sal wasaaraha Britain David Cameron ayaa tilmaamay in uu dhamaan golaha wasiirada ka sugayo in ay ku taageeraan qorshahiisa Midawga Yurub.
Isaga oo ka hadlaya kulanka todobada dal ee uu dhaqaalahoodu horumaray ee loo yaqaano G7 ee ka socda Germanka, waxa uu sheegay in uu ku kalsoonyahay in uu samayndoono isbadalo ku filan laakiin wuxuu tilmaamay in wasiirkii aan taageeraynin uu is casilo.
Rai’sal wasaaruhu waxaa kale oo uu sheegay in uu aragti furan ka qaadandoono wakhti u yeelida aftida ka bixida ama ka sii mid ahaanshaha qaaradda Yurub.
Arrintani waxay timid kaddib markii madaxwayne Obama uu ku dhawaaqay in uu doonayo in Britain ay ka sii mid ahaato Midawga Yurub.
Rai’sal wasaaruhu wuxuu sheegay in qofkii doonaya in uu dawladda ka sii mid ahaado in looga baahanyahay in uu qaato aragtidood ay ku doonayaan in dib loola xaajoodo Midawga Yurub taasi oo ah in afti la qaadao, taasina ay horseedidoonto natiijo wax ku ool ah.
Somalia: Dadwlada Oo Maanta Ka Hadashay Eedaymo Loo Soo Jeediyey Shirkada SOMA OIL & GAS
Kooxda Chelsea Oo Saacadaha Soo Socda Soo Xaro Galin Doonta Ciyaariyahanka Khadka Dhexa Ee Aaron Ramsey
Breaking: Somali PM sacks Minister for Education
Ra’iisal wasaaraha Ethiopia oo booqoshadiisii ugu horeysay ku tagaya Mareykanka
Murashax Cabdiraxmaan Ciro Iyo Weftigii Uu Hoggaaminaayey Oo Kulan Ballaadhan La Qaatay Jaaliyadda Somaliland Ee Magaalada Sheffield